Gareth Bale: Charlie Adam Waa Doqon Aan Caqli Laheyn, Raaligelina Kama Aqbalayo. - jornalizem
Gareth Bale: Charlie Adam Waa Doqon Aan Caqli Laheyn, Raaligelina Kama Aqbalayo.
Ciyaaryahanka kooxda Tottenham Gareth Bale ayaa ugu yeeray ciyaaryahanka khadka dhexe ee Liverpool Charlie Adam ‘doqon’ ka dib markii uu Charlie Adam dhaawac u geystay Bale ciyaar saaxiibtinimo oo ka dhacday Baltimore.
Labada ciyaaryahan ayaa tariikh hore oo sidaan oo kale lahaa, iyadoo Adam uu canqowga ka dhaawacay Bale 2011 taasoo sababtay inuu ciyaaryahanka reer Wales garoomada ka maqnaado muddo seddex bilood ah.
“Wixii aan kaga arkay garoonka dhexiisa, waxa ay ila tahay inuu yahay doqon” ayuu yiri Bale.
“La yaab ayay igu aheyd inuu taakal sidaasi oo kale ah igu sameeyo ciyaar saaxiibtinimo. Waxaan halkaan u joognaa dhamaanteen inaan dhisno taam ahaanshaheena, wixii uu sameeyay waxa ay ahaayeen wax maskaxda ka weyn”
“Lakiin dadka qaarkiis ayaa sidaasi ah, waana wax qaldan”.
“Canqowgeyga aad ayuu ii xanuunayaa, weliba si aad ah. Waa inaan sugnaa oo aragnaa sida ay wax noqdaan. Sida ay u badan tahay waxaan saari doonaa raajo”. “Waxaa jira sawiro internetka ku jira oo ku aadan wixii uu igu sameeyay hada ka hor markaasoo uu iga dhaawacay canqowga”.
“Waxaan maqnaa markaas seddex bilood, hal ciyaaryahan ayaana ii sheegay inuu doonayay inuu sidaas oo kale igu sameeyo mar kale”.
“Sida daacada ah, waligeyga waxba kuma aanan sameynin. Labo jeer ayuu sidaan taakal iigu galaayaa, labada jeerna wuu I dhaawacay”.
“Waan iska fahmi lahaa hadii ay ahaan laheyd mid kama ah, inkastoo ay ciyaar saaxiibtinimo aheyd. Lakiin kubada waxa ay isaga dhaaftay ilaa 10 yaardi, mana aysan u dhaweyn isaga, markii uu canqowgeyga iga dhaawacayay”.
“Marka qof uu taakal xun kugu galo ciyaar dhexdeeda waa uu ku yimaadaa waana uu ku raaligeliyaa. Lakiin wax raaligelin ah kama aanan helin, daacadiina kama rabo wax raaligelin ah”.
“Waa nuuca qof ee uu yahay. Had ka hor ayuu sidaan igu sameeyay, sidaasi darted ma aqbali doono raaligelintiisa”.
“Waxa kaliya aan rabo waa inaan ciyaaro. Mararka qaar waa wax iska caadi ah marka taakal laguugu galo, lakiin marka ay ku dhawaato in taakalkaas uu hanjabaad u noqdo mustaqbalkaada ciyaareed, waxa ay noqoneysaa arin halis ah”.
“Ma ahan wax qof isboorti ah uu sameeyo, mana u maleynayo inuu jiro ciyaaryahan sidaas oo kale ah”.